JWXO, Jijiga Way Joogtaa! Xafladaha iyo Qaraabo Sallaanku Kolka ay Dhamaadaan Maxaa Xigi? – Rasaasa News
Faallo: Waxaan jeclahay in aan idiin iftiimiyo xogaha qarsoon, kuwo la filan karo in ay dhacaan iyo waxa aan jeclaan lahayn.
Jwxo waxay horsocotay oo ay hogaan u tahay halgan shacab gobonimo doon ah uu waday, go,aankana hogaanka kaligeed ma laha
Hogaanka iyo taageerayaasha Jwxo aad bay ugu faraxsan yihiin in ay yimaadaan deegaanka Soomaaliada, sababtuna ma cada. Wax qodobo ah oo lagu heshiiyey iyo dukuminti la saxiixay midna lama arag. Cid sheegi karta waxa dhex maray Abiy iyo ONLF ma jirto, marka laga reebo hadalkii Daa,uud Ibissa hogamiyaha OLF oo yidhi “waa loo yeedhay ururada Mucaaradka, laakiin heshiis dawladu nalama galin.”
JWXO, waa labo qaybood; qayb dalka joogta iyo qayb dibada joogta. Labada qayboodba Itoobiya waxay ku talo gashantahay in ay qanciso; qaybta dibada joogta oo ah qaybta siyaasada iyo Jaaliyaadka lagu samrin dhaqaale. Qaybta gudaha joogta oo ah kuwa qoriga waday iyo shacabkii taageerada ka daba waday shaqooyin ayaa lagu qancin.
Arimahan fulintooda waxaa wakiil uga ah Itoobiya waa ismaamulka Soomaalida oo sida uu ula dhaqmayo ONLF kor looga yeedhin doono. Waayo aragnimada hore loo soo maray iyo dhaqmaadka gumaysiga marna lagama fili karo in ay si daacad ah u fuliso wixii afka la isaga sheegay.
ONLF, waxay ku talo gashantahay in ay xafiisyo meelwalba ka furato, shaqooyinka deegaankana ka qayb gasho hoos ilaa kor Boolis, xisbi iyo madax xafiiseedba. Waxay isku dayi doontaa in ay jihayso hanaanka maamul ee deegaanka Soomaalida si ay ugu soo baxdo doorashada dhici doonta sideed iyo toban bilood (18 bilood) ka dib. Haday sidaas ku wada hadleen doonayaana in ay arintaa maraan, Itoobiya aqoon baa ugu dhiman.!
Haday fahamsan tahay, JWXO, waa urur leh awood shacab oo bisil, laakiin JWXO-da maanta, waxaad moodaa in ay ka khibrad yar tahay JWXO-dii 1993. Waxaan filayaa in ay fiicnaan lahayd in xafiisyo ay meel walba ka furaan. Xafiisyada waxaa wadi masuuliyiin iyo kaadiriinta dalka jooga, kuwaas oo shaqaalayn doona dhamaan dadka aqoonleyda ah ee Soomaalida ah.
Qaybta dibada joogta waxay ku laaban rugahoodii, waxayna kordhin kulamada iyo kasbashada bulshada caalamka iyo Soomaalidaba. Halkaas waxaa ka abuurmi xoog midaysan oo Soomaaliyeed oo isku xidhan diyaarna u ah hanashada ujeedooyinka dadwaynaha. Itoobiyana waxaa qasab ku ah in ay qaado codka kalsoonida ee ay dadwaynaha Soomaalidu doonayaan “Haa Itoobiya iyo Maya Itoobiya.”
Guusha iyo guul darada JWXO ee Jijiga, waxay ku xidhan yihiin sida ismaamulka deegaanku ula aragti noqdo dadwaynaha iyo JWXO. Hadii maamulku isu arko mid Itoobiya waxa u dhiibatay qaatana waxa ay u yeedhiso waa jugjug meeshaada joog. Hadiise uu maamulku isu arko in uu mid sharci federal ah ku dhisan una shaqeeya dadwaynaha Soomaalida, kana fogaado eedo sokeeye oo keeni kara garab siinta Itoobiya.